eParewa || Peace and Prosperity » मुत्रनलीमा स‌ंक्रमण भएको बेलामा याैन सम्बन्ध राख्न हुन्छ कि हुदैन ?
मुत्रनलीमा स‌ंक्रमण भएको बेलामा याैन सम्बन्ध राख्न हुन्छ कि हुदैन ?
२०७५ माघ १२ गते शनिवार ०८:४०
नेशनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थका अनुसार ४० देखि ६० प्रतिशत महिलाहरुलाई आफ्नो जीवनकालको क्रममा कम्तिमा पनि एकपटक युटिआईको समस्या भएको हुन्छ ।यसमध्ये पनि एक चौंथाई महिलाहरुलाई एकपटक मात्रै होइन बारम्बार यस्तो संक्रमण हुन्छ ।पुरुषको...
नेशनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थका अनुसार ४० देखि ६० प्रतिशत महिलाहरुलाई आफ्नो जीवनकालको क्रममा कम्तिमा पनि एकपटक युटिआईको समस्या भएको हुन्छ ।
यसमध्ये पनि एक चौंथाई महिलाहरुलाई एकपटक मात्रै होइन बारम्बार यस्तो संक्रमण हुन्छ ।पुरुषको तुलनामा महिलाहरुलाई यस्तो समस्या धेरै हुन्छ किनभने महिलाहरुको मुत्रमार्ग छोटो हुन्छ । यसैकारण ई. कोलाई जस्ता ब्याक्टेरिया रेक्ट्रेमबाट सजिलैसँग शरीरमा पुग्छ ।
के यौनसम्पर्क गर्नाले यो संक्रमण बिग्रन सक्छ ?
युटिआईको समस्याबाट गुजि्ररहेको हुनुहुन्छ भने यौनसम्पर्क राख्ने बारेमा सोच्न पनि हुँदैन । विशेषज्ञहरुका अनुसार युटिआई भएको अवस्थामा यौनसम्पर्क गर्ने बारेमा सोचिरहनुभएको छ भने यसले संक्रमणको स्थितीलाई अझ नराम्रो बनाउन सक्छ ।यसले तपाईंलाई पहिलोपटक इन्फेक्सन सुरु भएको अवस्थामै पुर्‍याउन सक्छ ।
यौनसम्पर्क गर्दा साथीलाई पनि संक्रमण सर्न सक्छ ?युटिआई भएको अवस्थामा सेक्स गर्नाले पार्टनरलाई पनि संक्रमण हुन सक्छ भन्ने तपाईंले सोच्नुहुन्छ भने बिल्कुल गलत सोचिरहनुभएको छ । युटिआई संक्रामक हुँदैन । तर अन्य यौनरोगहरु भने यौनसम्पर्क माध्यमले पार्टनरसम्म फैलन सक्छ ।यौन सम्पर्क गर्दा तपाईंको संक्रमण साथीलाई सरेको तपाईंलाई लागेको छ भने युटिआई नभई क्लेमिडिया वा गोनोरिया हुन सक्छ ।
यौनसम्पर्क कहिले गर्ने ?
तपाईंलाई युटिआई भएको छ भने सबैभन्दा पहिले यसको उपचार गराउनुहोस् । चिकित्सकले तपाईंको पिसाबको जाँच गरेर युटिआई भएको नभएको पुष्टि गर्छन् । यसैको आधारमा एन्टिबायोटिक औषधिहरु दिइन्छ । एकपटक जब तपाईं डाक्टरले बताएको औषधिहरुको सेवन गरेर पूर्णरुपमा उपचार गराउनुहुन्छ त्यसपछि केही समयमै संक्रमण निको हुन्छ । पूर्णरुपले युटिआईको लक्षण सकिएपछि मात्रै यौनसम्पर्क राख्नु तपाईंको लागि सुरक्षित हुन्छ ।
यदि उपचार पुरा भएपछि सिन यौनसम्पर्क गर्दा तपाईंलाई पोल्ने वा दुखाई महसुस हुन्छ भने यसको मतलब संक्रमण पुर्णरुपमा ठिक भएको छैन र अहिले रोकिने आवश्यकता छ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
प्रकाशित मिति २०७५ माघ १२ गते शनिवार ०८:४०